အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် 2019 NAB ပြရန်သတင်း - တီဗီ Cultura ဘရာဇီးမြက်ချိုင့်နှင့်အတူအနာဂတ်များအတွက်ပြင်ဆင်ကြရသည်။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်
Home » သတင်း » တီဗီ Cultura ဘရာဇီးမြက်ချိုင့်နှင့်အတူအနာဂတ်ပြင်ဆင်
တီဗီ Cultura ဘရာဇီးမြက်ချိုင့်နှင့်အတူအနာဂတ်ပြင်ဆင်
Montreal - 8: 00 BRST ဇန်နဝါရီလ 15, 2019- ဘရာဇီးရဲ့ တီဗီ Cultura ရှေးခယျြထားလိုက်ပါတယ် မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden အသစ်တိုးချဲ့ပလေးအောက်ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အတူ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာမြှင့်တင်ရန်အမှတ်တံဆိပ်။ ယင်း၏ကြည့်ရှုရန်ချမ်းသာသောအကြောင်းအရာများကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်၎င်း၏ရူပါရုံကို supporting - ထုတ်လွှင့်သည်ယခုအခါနောက်ထပ်ချန်နယ်, ပိုမိုမြင့်မား resolution ကိုအကြောင်းအရာနှင့်ချောမွေ့ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မြက်ချိုင့်က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် installed K2 ထိပ်သီးအစည်းအဝေး 3GTransmission လိုင်းမီဒီယာဆာဗာကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ် workflow နှင့်ထုတ်လွှင့် applications များ၏ပြီးပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်မှုယူအဖြစ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအလုပ်လုပ်သောဖိုင်ကို-based အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် high-performance ကိုဖိုင်ကိုစစ်ဆင်ရေး၏ပေးပို့လွယ်ကူချောမွေ့ရန်တီဗီ Cultura ဖွင့်။ ဆာဗာလေး၏အရွယ်မှာအသံမြေပုံများအတွက်လမ်းကြောင်းများ, up / down / လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အချိုးပြောင်းလဲခြင်း, နဲ့ content သိုလှောင်မှုနာရီရာပေါင်းများစွာထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါ K2 ထိပ်သီးအစည်းအဝေး 3G ကိုလည်းအလွယ်တကူထုတ်လွှင့်မယ့်ပလေးအောက်လိုအပ်ချက်များကိုအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံး programming ကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်အဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းပေါ်မှာတည်းခိုရန်ကျူးလွန်ခဲ့ကြ," Gilvani Moletta, အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးတီဗီ Cultura ကပြောသည်။ "အစဉ်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကို၏ပြောင်းလဲနေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအရေးပါသည်, ငါတို့ကဒီအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်မြက်ချိုင့်ခိုလှုံပါ၏။ အဆိုပါမြက်ချိုင့် K2 မီဒီယာဆာဗာလုပ်ငန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးစကေးနိုင်စွမ်းနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စစ်ဆင်ရေးကိုခိုင်ခံ့စေခဲ့ပါသည် - ။ ယနေ့နှင့်အနာဂတ်ကာလများတွင် "
တီဗီ Cultura ယခု, sixLDX 80 Flex ကိုကင်မရာများလည်းပါဝင်သည်သောပြီးပြည့်စုံသောအဆုံးမှအဆုံးသို့မြက်ချိုင့်ရှာမှီးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာရှိပြီး GV STRATUS ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်နှင့် EDIUS တည်းဖြတ်ရေးဆော့ဖျဝဲ.
"တီဗီ Cultura ယင်း၏ကြည့်ရှုရန်အကြောင်းအရာထိတွေ့ဆက်ဆံ, စွဲငြိဖွယ်ရာကယ်နှုတ်တော်မူတစ်ခုယိမ်းယိုင်ကတိကဝတ်နှင့်အတူလက်တင်အမေရိကတီဗီစျေးကွက်အတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်" ဟု Nahuel Villegas, ရောင်းအား၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, လက်တင်အမေရိက, မြက်ချိုင့်ကပြောသည်။ "ကျနော်တို့ကတီဗီ Cultura တစ်ဖန်အနာဂတ်-အထောက်အထားမှမြက်ချိုင့်မှလှည် ့. ကြည့်ရှုသူမျှော်လင့်ချက်များဖြစ်ပေါ်နေသောနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ဖို့က၎င်း၏အခြေခံအဆောက်အအုံခိုင်ခံ့စေတော်မူကြောင်းကိုအလွန်ဂုဏ်ယူကြသည်။ တီဗီ Cultura နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံး 12 နှစ်အတွင်းတိုးပွားလာကြပါဘူးခိုင်ခံ့သောဆက်ဆံရေးမျိုးသူတို့စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်ကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်ယှဉ်ပြိုင်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချအားပေးတော်မူပြီ။ "
ပိုလနျတီဗီန်ဆောင်မှုအပေါ်ပွဲဦးထွက်စေ TOYA နှင့်အတူမေး Polska မိတ်ဖက် - မတ်လ 18, 2019
MediaKind NAB ပြရန် 2019 မှာယင်း၏ဠာအစုစု၏ပွဲဦးထွက်နှင့်အတူတီဗီ၏ခေတ်သစ်ကြိုဆို - မတ်လ 18, 2019
NVP မြက်ချိုင့်ထဲကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Solutions နှင့်အတူ 4K UHD နှင့် HDR များအတွက် OB ရေယာဉ်စုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - မတ်လ 18, 2019
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor မြက်ချိုင့် H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ ပေါင်းစည်းမှု isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း လှံ & Arrows တီဗီ Cultura UHD / 4K / HD ကို က Ultra HD ဖိုရမ် viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို	2019-01-15
ယခင်: တည်နေရာအသံထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် TV ကိုပညာရှင်များအဘို့အ Wisycom Q & A အိမ်ရှင်အဖြစ်
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ BSc ကုန်စည်ပြပွဲမှာ Vitec ထုတ်လုပ်မှု Solutions
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ မတ်လ 2019 (371) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (325) ဇန်နဝါရီလ 2019 (280) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (243) နိုဝင်ဘာလ 2018 (406) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (397) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (779) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (684) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (606) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (123) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (357) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)